Baarlamanka Puntland oo si adag uga hadlay xubno isugu jira culimo iyo ganacsato oo lagu xir-xiray Boosaso – Kalfadhi
Golaha wakiillada Puntland ayaa sheegay in ay guul-daraysteen dadaalo dhawr ah oo guddoonka iyo qaar ka mid ah baarlamanku ay xukuumadda ugu jeediyeen in la sii daayo saddex ka mid ah wadaadada iyo ganacastada gobolka Bari.
Ragga xir-xiran ayaa ka mid ahaa guddi ay dowladdu qayb ka tahay oo sannadkii hore isu xilqaamay in la dayactiro jidka hawl-bowlaha ah ee magaalada oo aad u burburay.
Xubnahan ganacsatada ayaa la xiray dabayaaqadii toddobaadkii hore, markii sida la sheegay ay diideen in ay dib u celiyaan lacag $150,000 oo dollar oo qayb ka ahayd qaaraanka wadada halbowlaha ah ee Boosaso taas oo ay ka heleen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Xiisadda ayaa ka sii dartay markii shalay ay dowladdu xirtay Sheikh Maxamed Macalin oo madax u ahaa guddiga isla markaasna ahaa qof si weyn looga ixtiraamo Boosaso, lagana yaqaanay deeganada Puntland.
Qaar ka mid ah xubnaha baarlamanka oo maanta shir jaraa’id ku qabtay aqalka golaha wakiillada ayaa si adag xukuumadda ugu dhaliilay xarriga xubnaha isugu jira ganacsatada iyo culimada ee guddigaas ka midka ahaa. Waxayna sheegeen in guddoonka baarlamanka iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha ay arrintan kala hadleen xukuumadda balse aysan baaqaas dowladdu wax garawshiyo ah ka bixin.
“Waxaan u shegaynaa xukuumadda arrimahaas in ay dib uga noqoto” Ayuu yiri xildhibaan Cabdijamaal Cismaan Maxamed. “Sida la sheegayna magdhow, ixtiraam iyo cafis bay ku leeyihiin dadka hadda xiran dowladda” wuxuu intaas ku daray in ay madaxweynaha ka sugayaan in uu jawaab ka bixiyo arrintaas.
Xildhibaanada kale ee hadlay waxay qaarkood xuseen in uusan sharciga waafaqsanayn xariga masuuliyiinta xiranni, maadama uusan jirin sharci qoran oo diidaya in qaarannada guddiyada bulshadu ay maraan khasanadda dowladda.